I-SAT Score Ukuthelekiswa kweeNkampani ezingama-23 zaseCal
Uthathe i-SAT, kwaye ufumene amanqaku akho - ngoku? Ukuba uyazibuza ukuba unayo izikolo ze-SAT uzakufuna ukungena kwelinye lezikolo zaseCalifornia State University , noluhlu lugxininiso lwamanqaku kuma-50% aphakathi kwabafundi ababhalisile. Ukuba izikolo zakho ziwela ngaphakathi okanye ngaphaya kwezi zigaba, ujoliswe ekufunyenwe kwelinye leyunivesithi yaseCal State. Uza kubona ukuba izikolo ezininzi ezingenayo izikolo ze-SAT ezidweliswe ngezantsi.
Oku kungenxa yokuba ezo zikolo zivavanywe ngokuzikhethela-izikolo zakho ze-SAT ayilona nxalenye efunekayo yesicelo.
Ukuthelekiswa kwee-SAT izikolo ezifunekayo zokwamkelwa kwizikolo ze-Cal State
Isikolo se-Cal State SAT Ukuthelekiswa (phakathi kwama-50%)
Cal Poly Pomona 440 560 460 600 - - ubone igrafu
Cal Poly San Luis Obispo 560 660 590 700 - - ubone igrafu
Chico 440 550 440 550 - - ubone igrafu
Fresno 400 500 400 510 - - ubone igrafu
Fullerton 450 550 470 570 - - ubone igrafu
Humboldt State 440 550 430 540 - - ubone igrafu
Long Beach 460 570 470 590 - - ubone igrafu
ilos Angeles 390 480 390 500 - - ubone igrafu
Northridge 400 510 400 520 - - ubone igrafu
Sacramento 410 520 420 530 - - ubone igrafu
San Bernardino 390 490 390 490 - - ubone igrafu
State of San Diego 490 600 510 620 - - ubone igrafu
State of San Francisco 430 540 430 550 - - ubone igrafu
State of San Jose 450 560 470 590 - - ubone igrafu
ESan Marcos 430 520 430 540 - - ubone igrafu
State Sonoma 440 540 440 540 - - ubone igrafu
Kwiiyunivesithi ezingabhalisi izikolo ze-SAT, unokwazi ukubona indlela olinganisa ngayo ngokuchofoza kwi-"see grafu" kwisikolo eso. Igrafu iveza i-SAT, ACT, kunye ne-GPA idatha yabafundi abamkelweyo, bayayinqatshwa, kwaye bafunwa kwiyunivesithi. Kwamanye amaxesha, abafundi abanamabanga aphantsi kunye namanqaku bayamkelwa, kwaye amanye amanani aphakamileyo kunye namabakala athatyathwa.
Oku kubonisa ukuba iiofisi zokungena zikhangele ngaphezu kwamanqaku kunye neemvavanyo zokuvavanya kwaye abafundi abanamanqaku aphantsi basenokuba badlalwa ngaphandle - ngaphandle kokuba banesicelo esinamandla.
Ngaphandle kweSan Diego State kunye neCal Poly San Luis Obispo, uya kuba yinjongo yokumkelwa kuzo naziphi na izikolo zase-Cal kunye nezikolo ze-SAT ezilinganiselweyo okanye zincinane ngaphantsi komyinge. I-Cal Poly San Luis Obispo iyona ekhethekileyo kakhulu kwiiyunivesithi ezingama-23, kwaye ukuba uyangeniswa uya kufuna i-SAT okanye i-ACT izikolo eziphezulu ngaphezu komyinge (ngokukodwa kwimathematika echazwe ngokubaluleka kwezibalo / zesayensi).
Ezinye izinto ezichaphazela ukungena
Ngokungafani nenkqubo yeYunivesithi yaseCalifornia , ukungena kwiiyunivesithi zaseCal State akusiyo yonke into. Izinto ezifana nesicatshulwa yesicelo , imisebenzi yangaphandle kunye neencwadana zinconywa azidlali indima kwinkqubo (abafundi be-EOP kunye nezinye iinkqubo ezizodwa zikhoyo kulo mgaqo-nkqubo). Inxalenye ebalulekileyo yesicelo sakho iya kuba yirekodi yakho yezemfundo ; abantu abamkelweyo baya kufuna ukufumana amabakala aqinile kwiiklasi zokulungiselela amakholeji. Abafundi abangazange bazalise iikhredithi ezifanelekileyo kwiinkalo eziphambili zezifundo ezifana nezibalo, isayensi kunye nesiNgesi zinganqatshwa.
Khangela le ngcaciso ngokubhekiselele kwicandelo le- SAT ye-admissions ye-Yunivesithi yaseCalifornia ukubona imigangatho ephakamileyo ye-California yeyunivesithi.
Kwinqanaba likazwelonke, le ngcaciso ye- SAT yedatha yamanyunivesithi aphezulu aseUnited States ibonisa indlela amaziko oluntu anokukhetha ngayo. Kuzo naziphi na kwezi zikolo, abafaki zicelo baya kufuna iimpawu ze-SAT eziphezulu ngaphezu komyinge.
Ngubani uBill France, uSr. kwaye Kutheni Waqala I-NASCAR?
Indlela Yokuthetha Imithetho Enganyanisekiyo ngesiTaliyane
IMizekeliso yaseTshayina-Sai Weng Ilahlekelwe iHhashi yakhe
Inyaniso okanye inkolelo-mfundiso: Akukho Athist in Foxholes
Biography yeCory Booker
Indlela yokulungisa i-Bumper yePlastiki yakho
Indlela yokubamba izandla kwiBallet